Jeremy Guan, onye isi njikwa Huaian ASN na nkà na ụzụ CO., LTD nyere ndị isi nke Huai'an District Technology Bureau nke bịara ụlọ ọrụ anyị maka nyocha na nyocha nke ọma na August 26th. Ndị isi ụlọ ọrụ nke teknụzụ dị mkpa na-ege ntị ...
Nkedo teepu mejupụtara otutu n'ígwé nke pụrụ iche faiba glaasi impregnated na resin.
1. Akwa ike na ịdị arọ: Odidi nke splin mgbe ọ gwọchara ya ji okpukpu iri abụọ nke plasta ọdịnala. Njirimara a na-achota ihe kwesiri ntukwasi obi ma guzosie ike mgbe edozichara. Ihe ndozi di obere ma ibu di nfe, ya na 1/5 nke itu ...
Etu esi eji teepu Orthopedic
site ha na 20-09-11
1. Idozi akụkụ ahụ merụrụ ahụ ma were akwa mkpuchi were ya kechie ya; 2. Mepee akpa nkwakọ nke nkedo teepu ma mikpuo bandeeji n'ime mmiri na ụlọ okpomọkụ nke 20 ℃ ~ 25 ℃ ihe dị ka sekọnd 4 ~ 8; 3. amanye si afanyekwa si mmiri, otu mpịakọta ga-eji na-ebukọtala ndị ọzọ mpịakọta t ...